HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulIMM Codsi Miisaanka Macaamiisha La Siiyay Cusbooneysiin
24 / 03 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Gobolka Marmara, TURKEY
xayeysiiska miiska xayawaanka ee casriga ah
Mid ka mid ah barnaamijyada mobilada ee sida aadka ah loo adeegsado ee Magaalada Caasimadda ah ee Istambul, “IMM White Table yenil waa la cusbooneysiiyay si loo bixiyo adeeg hufan. Nooca cusub ee hawsha xubinnimada waxaa lagu sameyn karaa waqti gaaban. Faahfaahinta codsiyadi hore ayaa sidoo kale la arki karaa.
Waaxda Xiriirka Dadweynaha ee Magaalada Istanbul (IMM) Waaxda Xiriirka Dadweynaha ayaa dib u cusbooneysiisay dalabka mobilka ee “IMM White Table mobil”, kaas oo soo jiidatay xiisaha weyn ee muwaadiniinta, taasoo ka dhigeysa mid waxtar badan. Nooca cusub ee dalabka, kaas oo sameeyay horumar badan, wuxuu kusii jeedaa inuu bixiyo xasilooni, deg-deg iyo helitaan fudud oo loogu tala galay adeegyada 7 / 24.
Citizens; Codsiga, gaadiidka, kaabayaasha, dib-u-dhiska, caafimaadka, degmada bulshada, gaar ahaan dhammaan aagagga adeegga IMM waa la dalban karaa.
Macluumaadka, fikradaha, talo soo jeedinta iyo codsiyada laga helo mobilada cusub ee Mobilka ah ee loo yaqaan 'BB IMM White Table İstanbul' oo loo soo bandhigo isticmaalka dadka deggan Istanbul ayaa si dhakhso leh looga baaraandegayaa. Muwaadiniintu si fudud ayey wax uga baran karaan dhamaan heerarka codsigooda.
Muwaadiniinta doonaya in ay codsadaan miiska cad marka loo eego arjiga dib loo cusbooneysiiyay, iyagoo raacaya dhowr tillaabo sahlan ayaa si dhakhso leh u gudan kara howlaha xubinnimada. Isticmaalayaasha ka diiwaangashan nidaamka lambarka Aqoonsiga TC, Magaca - Magaca awoowga, macluumaadka boostada, waxay ku dhaqaaqaan dalabka iyagoo ku qoraya lambarka sirta ah ee la socda SMS taleefannadooda gacanta;
Waa ku filan adeegsadaha raba inuu codsi cusub ka sameeyo arjiga White Table, ku qor maadada uu doonayo inuu u gudbiyo farriinta farriinta oo riix batoonka Tamam Buuxi ”. Sawir, fiidiyow ama maqal cod ayaa sidoo kale lagu dari karaa mowduucyada loo gudbiyo miiska Cad. Codsiyada u baahan goob, badhanka Al Hel meesha "badhanka waa la dhajin karaa loona gudbin karaa miiska cad markiiba.
Codsiga cusub ee mobilada, faahfaahinta codsiyada hore ayaa sidoo kale lagu arki karaa. Muwaadiniintu way abuuri karaan oo keydin karaan sawirro kahor inta aysan fariintooda u dirin miiska cad. Isugeynta, kala-goynta ayaa lagu sameyn karaa farriin qabyo ah, waxaa loo diri karaa Shaxda Caddaan taariikhda la doonayo.
Marka tabka 'Codsiyada My' laga xusho arjiga, codsiyada la abuuray iyo faahfaahintooda waa la arki karaa. Nidaamka, qaybinta codsiyada maabka ayaa marin looga heli karaa. Xaaladaha codsiyada badan, shaandhaynta sidoo kale waa macquul. Nooca cusub, codsiyada aan lagaraneyn halka loo yaqaan 'Magaca-Magaca' 'lama aqbalayo.
Codsiga moobiilka "İBB White White", oo lagu bilaabay 2014, waa lagala soo bixi karaa oo si bilaash ah ayaa looga isticmaali karaa suuqyada macruufka iOS iyo Android. Codsiga waxaa soo dejiyay tiro dhan 92 kun oo 610 muwaadiniin ah illaa maanta.
White Bondage ee Ovacik
Sahanka baabuurta ee Bursan waa cagaar-cad, laakiin waa mid soo jiidasho leh
Rijeetada cad ee Palandöken bariga
IBB Miis Caddaan
ApplicationBB White Table Application Application
Miiska Cadaanka ah